Global Voices teny Malagasy » Hôpitaly Tsy Miankina Any Bangaldesh: Razana Tazonina Ho Antoka Satria Tsy Afaka Nandoa Vola Teo Noho Eo Ny Fianakaviana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Septambra 2014 2:57 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Erikah
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fahasalamàna, Fanoherana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Voina, Zon'olombelona
Tsy naharitra ny famoretana natao taminy ny United Hospital Ltd. , hôpitaly tsy miankina any Dhaka, renivohitr'i Bangladesh, ka namotsotra ny razan'ilay marary  notsaboina ka maty tao, raha tsy nanaiky izany tamin'ny voalohany noho ny fianakavian'ilay rangahy tsy nahavita nandoa ny faktiora teo noho eo, izay niteraka fanafintohinana ho an'ny vahoaka.
Tao amin'ireo media sosialy, nisy adihevitra betsaka mikasika ilay fomba mitazona ny razana mandrapahaloa ny vola, izay mifanohitra amin'ny fotokevitra tokony arahana. Nanoratra tao amin'ny bilaogin'ny BDNews24.com i Kowshik Ahmed, bilaogera :
Nangataka ilay hôpitaly hanao fialantsiny noho ny “fihetsiny mifanohitra amin'ny fotokevitra tokony arahana” i Russel Parvez, bilaogera  :
Notsiahivin'ilay mpitoraka bilaogy sady mpanao gazety, Abu Sufian , fa tsy vao voalohany izao ny United Hospital no nitazona razan'olona notsaboina tao, mandrapahaloa ny faktiora, reminded blogger and journalist .
Namoaka fanambaràna an-gazety  ny United hospital, milaza fa efa nampitandrina ny fianakavian'ilay notsaboina izy momba ireo saran'ny fitsaboina. Nanohy ny fitsaboina ny hôpitaly raha nahazo toky avy tamin'izy ireo fa afaka mandoa tsara ny fianakaviana ary ho voaloa ny faktiora. Nanipika ny hôpitaly fa saran'ny fanafody nitazoman'aina ary ny fitaovana ilay $25,000 ambiny tsy voaloa, ary hahatonga faty antoka lehibe ho an'ny hôpitaly ny tsy fandoavana io. Tsy nanisy resaka momba ny fitazonany ny razana tsy ho any amin'ny fianakaviana noho ny tsy fandoavana ny vola anefa ny hôpitaly tamin'izany.
Araka ny antontanisa ny taona 2006, hôpitalim-panjakana ny 40 isanjaton'ireo hôpitaly miisa 1.683 any Bangladesh, raha tsy miankina amin'ny fanjakana kosa ireo ambiny. Mety ho enta-mavesatra ho an'ny fianakaviana ny fampidirana hôpitaly ny mararin'aretina lehibe sy mitaiza, raha tsy misy ny politika fiantoham-pasalamana tsy lafo no sady mandaitra . Mety hampandoa sarany mihoatra lavitra noho izay zakan'ny fahefan'ny olon-tsotra Bangla ireo sasany amin'ny Hôpitaly lehibe tsy miankina sahala amin'ny United.
Naneho hevitra taminà lahatsoratra tao amin'ny Sachalayatan ilay bilaogera, Nir Sondhani , naneho ny amin'ny maha fitadiavam-bola fotsiny ny hôpitaly tsy miankina ao Dhaka. Nampitandrina ireo olom-pirenena tsy handeha ho any amin'ny hôpitaly tsy miankina, raha tsy manana loharanom-bola ho enti-manana izany, moa ilay mpanao gazety sady mpitoraka bilaogy, Mahbub Morshed :
Nasoritan'i Durjodhon , mpampiasa Facebook, hoe ” olan'ny fanambanian-tena”, ny filazana ny fahasahiana mandeha any amin'ny hôpitaly tsy miankina raha toa ka tokony ho any amin'ny hôpitalim-panjakana, nefa tsy manana fahafahana ara-bola akory:
Mifanalavitra be  ny sarany eo amin'ireo hôpitalim-panjakana sy ireo hôpitaly tsy miankina, tsy noho ny fikarakarana na ny kalitaon'ny dokotera loatra akory, fa kosa eo amin'ireo kalitaon'ny fitaovam-pitsaboina, ireo kojakoja ary ny fahazoana aina amin'ny fahatsaran'ny toerana. Mety ho latsaka be hatrany amin'ny BDT 40.000 ka hatramin'ny 5.000 ($50 ka hatramin'ny $64), ny fitsaboina ny marary fo iray mandritra ny fito andro, noho ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana. Mety hampandoavin'ny hôpitaly tsy miankina BDT 100.000 (around $1.300) io marary io ihany.
Dokotera iray ihany ho an'ny olom-pirenena miisa 2.000  no ananan'ny Bangladesh, izay manana mponina miisa 150 tapitrisa. Misy fandriana iray fampiasan'ny hôpitaly ho an'ireo olom-pirenena miisa 3.000. Manana fotodrafitrasa lehibe ho an'ny fahasalamana  i Bangladesh manerana ny firenena, saingy any amin'ireo toeram-pitsaboan'ny fanjakana ireo, mbola mila fenoina ny 48 isanjaton'ny toeran'ireo dokotera . Ireo tsy fahampiana any amin'ireo hôpitalim-panjakana ireo, ary ireo tsy fahatokisana ny fikarakarana no manosika ny olona hisafidy ny ho any amin'ny hôpitaly tsy miankina, izay amin'ny sarany lafo dia lafo.
Fanampin'izany ny fitsaboina tsizarizary feno fitaka atrehan'ireo marary. Nampahatsiahy ny momba ilay olona akaiky azy i Helen Ahmed , mpisera ao amin'ny Quora, tambajotra sosialy Bangla – sahala amin'ny Besto :
Namorona kaomity  ny fanjakana mba hanao fanadihadiana ny olana nisy teo amin'ny United Hospital. Nanome dimy volana ho an'ny fianakaviana ny hôpitaly mba hanonerana ny BDT 1.5 tapitrisa, izany hoe nisy fihenam-tsarany 25 isanjato. Raha tsy izany, lazain'izy ireo fa hotoriany ilay fianakaviana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/04/63504/
 United Hospital Ltd.: http://www.uhlbd.com
 namotsotra ny razan'ilay marary: http://www.bbc.co.uk/bengali/news/2014/08/140817_mk_bangla_hospital.shtml
 Kowshik Ahmed,: http://blog.bdnews24.com/kowshik/158424
 Russel Parvez, bilaogera: https://www.facebook.com/rasel.pervez/posts/10152382690868335
 Abu Sufian: http://www.somewhereinblog.net/blog/abusufianir/29525138
 fanambaràna an-gazety: http://www.uhlbd.com/newsdetail.php?id=117
 fiantoham-pasalamana tsy lafo no sady mandaitra: http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_health_policy
 Nir Sondhani: http://www.sachalayatan.com/rezwan/39117
 Mahbub Morshed: https://www.facebook.com/mahbubmorshed/posts/10152599242772777
 Mifanalavitra be: http://www.notun-din.com/?p=18835
 Dokotera iray ihany ho an'ny olom-pirenena miisa 2.000: http://www.bonikbarta.com/2014-08-13/news/details/10327.html
 fotodrafitrasa lehibe ho an'ny fahasalamana: http://www.napsipag.org/pdf/Issues_of_inequality.pdf
 48 isanjaton'ny toeran'ireo dokotera: http://app.dghs.gov.bd/manpower/report/
 Helen Ahmed: http://www.beshto.com/public/proshnoDetails/4231